Sheekadayda: Maxaan tababar Yooga uga qabtay Puntland? – GEELLE MAG
Editor Posted On September 7, 2019
Saynab Daahir Cabdi, waxaan ahay 24 jir, waxay qorta boogagta caruurta, waana macalamid ku tababarta dhalinyarada Yogada, ciyaar dhaqameed jimicsina usi badashay oo ka caan ah Hindiya.
Saynab Daahir Cabdi, waa 24 jir, shahaadada mastarka ah ka haysta Waxbarashada kuna takhasustay horumarinta manhajka. Sidoo kale waa macallin Yoga. Marka ay sharraxayso nolosheedi caruurnimo wax badan kama xasuusan karto. Lakiin waxay ahayd mid waalidkeed aad u jecel.
“Waxaan kaliya oo aan xusuusan karaa helitaanka buundooyin wanaagsan oo dugsiga ah oo ah hadafkeyga ugu weyn oo aan aabahayga kaga farxin karo.”
Sababta ay Yogada u baratay ay ah mid caafimaad la xidhiidha. Waxana iyada oo 15 sano jir ah dhakhtar ku yidhi “waa in aad iska badashaa sidaad u neefsato,” maadama ay ahayd qof hadalku ku dhago marka ay hadlayso.
” Waan fahmi kari waayey waxa ay ula jeedo bedel qaabka neefsashada, laakiin waxay igu tidhi waa in aad joojisaa sidaad u neefsanayso hadda ma’ahan wadada saxda ah, waa in aad barataa farsamooyinka cusub ee neefsiga ah.”
“Markaa waa markii aan bilaabay in aan cilmi-baaris ku sameeyo farsamooyinkan oo dhan waan ku caawinayaa, taasina waa sida ay nolosheyda ku dhacday”.
Dhowr bilood ka hor, kalfadhiga Yoga ee Garoowe wuxuu ka dhigay baraha bulshada in ay ka hadlaan. Qaarkood iyagoo taageeraya abaabulayaasha, qaar kalena way diideen tallaabada. Waxaan haynaa sheeko haweeney dhiirran oo abaabushay dhacdada.
World Yogo Day.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo ka qeyb galay maalinta caalamiga ee Yogo Day oo Garoowe lagu qabtay.
Posted by Puntland State House on Sunday, June 30, 2019
Saynab ayaa sheegtay in la buunbuuniyey sheekadan. Yoogadana aynan ka duwanayn Karatayga oo ah ciyaar laga keenay Buudiyiinta.
Waxa ay ka sheekaysay sidii ay kusoo bilaabatay iyo waxa dhaliyey in lagu qabto Yogada magaalada Garowe.
“Bilowgii waxaan kaliya bari jiray gabdhaha, waxan qaban jiray tababaro gabdhaha kaliya loo qabto. Lakiin dawladda iyo safaaradda Hindidaa ayaa waxay iga dalbatay inaan ku qabto tababar Yoogo magaalada Garowe. Waxay ahayd arrin aad u xamaasad badan. Waxaana kasoo qaybgalay wiilal iyo gabdho.”
” aad ayaan ugu farxay.”
Kaa daawo sheekada Saynab halkan:
Xawaaladda Taaj oo ku Guuleystay Xawaaladda ugu Fiican Qaarada Afrika